ဘုရားသခင်ရွေးချယ်ထားသော - ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘုရားကျောင်း
ဆောင်းပါး > Tammy Tkach > ဘုရားသခငျသညျကရွေးချယ်
ဂိမ်းတွင်ပါ ၀ င်သူသို့မဟုတ်အခြားကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသောအသင်းတစ်ခုသို့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရဖူးသူတိုင်းကိုရွေးချယ်ခြင်း၏ခံစားချက်ကိုသိသည်။ ၎င်းသည်သင့်အားမျက်နှာသာပေးခံရပြီးခံစားခြင်းကိုခံစားစေသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းမခံရခြင်း၏ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုသင်သိပြီးသင်လျစ်လျူရှုခံထားရသည်ဟုခံစားရသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကို မည်သူဖြစ်သနည်း၊ ဤခံစားချက်များကို နားလည်ပေးတော်မူသော ဘုရားသခင်သည် မိမိ၏လူမျိုးတော်အဖြစ် ဣသရေလအမျိုးကို ဂရုတစိုက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး မတော်တဆဖြစ်မလာကြောင်း အလေးပေးဖော်ပြသည်။ “အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့သည် သင်တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏ သန့်ရှင်းသောလူမျိုးဖြစ်ကြပြီး၊ ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့အား မြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှသော လူမျိုးတို့တွင် မိမိလူအရာ၌ ရွေးကောက်တော်မူပြီ” (တရားဟောရာ ၁။4,2) ဓမ္မဟောင်းကျမ်းရှိ အခြားအခန်းငယ်များတွင် ဘုရားသခင်သည် မြို့တစ်မြို့၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်များ၊ တရားသူကြီးများနှင့် ဘုရင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြသည်။
ကောလောသဲမြို့ 3,12 နှင့် 1. လွမ်းပါတယ်။ 1,4 ငါတို့သည်လည်း ဣသရေလကဲ့သို့ပင် ရွေးကောက်ခံရကြောင်း ကြေငြာသည်- “ဘုရားသခင် ချစ်သော ညီအစ်ကိုတို့၊ သင်၏ (မိမိလူတို့အား) ရွေးကောက်ခြင်းအတွက် ငါတို့သည် သိကြ၏။” ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ထဲမှ တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ မတော်တဆမှုတစ်ခုမျှ မဖြစ်ပေ။ အကြံအစည်၊ သူလုပ်သမျှအရာအားလုံးသည် ရည်ရွယ်ချက်၊ မေတ္တာ၊ ပညာဖြင့်ပြီး၏။
ခရစ်တော်၌ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိသေသလက္ခဏာဆိုင်ရာ ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးဆောင်းပါးတွင်၊ ကျွန်ုပ်သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ခြေရင်း၌ "ရွေးချယ်မည်" ဟူသော စကားလုံးကို ရေးထားသည်။ ၎င်းသည် ခရစ်တော်၌ ကျွန်ုပ်တို့မည်သူဖြစ်သည်ကို သိခြင်း၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး ဝိညာဉ်ရေးကျန်းမာရေးအတွက်လည်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည့်အရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤနေရာ၌ရှိနေသည်ဟု ယုံကြည်ပါက သို့မဟုတ် အန်စာတုံးတစ်ခု၏လှည့်ပတ်မှုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်း (ယုံကြည်မှု) အားနည်းလာမည်ဖြစ်ပြီး ရင့်ကျက်သောခရစ်ယာန်များအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ခံစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီသည်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးနာမည်ဖြင့်ခေါ်ဆိုသည်ကိုယုံကြည်ရမည်။ သူကမင်းကိုငါနဲ့ပခုံးပေါ်ထိုးပြီး“ ငါနင့်ကိုရွေး၊ ငါ့နောက်လိုက်ပါ” လို့ပြောတယ် ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုရွေးချယ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး စီအတွက်အစီအစဉ်တစ်ခုရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။
နွေးနွေးထွေးထွေး ခံစားရရုံမှတပါး ဤအချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ဘာလုပ်သင့်သနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခရစ်ယာန်အသက်တာ၏အခြေခံဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကိုယ်တော်နှင့်စပ်ဆိုင်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ချစ်မြတ်နိုးခံရသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိကြသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ခမည်းတော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဂရုစိုက်တော်မူကြောင်းကို ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား သိစေလိုသည်။ ဒါပေမယ့် ငါတို့ဘာမှလုပ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ မောရှေ၏ပဉ္စမမြောက်ကျမ်းတွင် ဣသရေလလူတို့ကို ပြောပြသည်အတိုင်း၊ 7,7 “ထာဝရဘုရားသည် သင်တို့ကို တပ်မက်၍ ရွေးချယ်တော်မူသောကြောင့်၊ အကြောင်းမူကား၊ သင်သည် လူမျိုးအပေါင်းတို့တွင် အငယ်ဆုံးဖြစ်တော်မူ၏။" ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ချစ်သောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒါဝိဒ်အား ဤသို့ပြောနိုင်သည်– “အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည် အဘယ်ကြောင့် ဝမ်းနည်းရသနည်း။ ဘုရားသခင်၌စောင့်ပါ။ အကြောင်းမူကား၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်နှင့် အကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်အတွက် ကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းပါမည်။” (ဆာလံ ၄2,5)!
ကျွန်ုပ်တို့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ့အတွက်မျှော်လင့်နိုင်၊ ချီးမွမ်းနိုင်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။ သို့ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားသူများထံလှည့်လည်ပြီးဘုရားသခင်၌ရှိသည့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်သည်။